ဖြစ်ရပ်မှတ်ပုံတင်ခြင်း Rant | Martech Zone
ဗုဒ္ဓဟူးနေ့, ဒီဇင်ဘာလ 7, 2011 တနင်္ဂနွေ, စက်တင်ဘာလ 30, 2012 ရောဘတ်ကွပ်မျက်
နွေ ဦး ရာသီတွင် Express Employment Professionals ဟုခေါ်သောကြောက်မက်ဖွယ်ကောင်းသောအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုကိုကမကထပြုခဲ့သည့်အံ့သြဖွယ်ကောင်းသော၊ အံ့သြဖွယ်ကောင်းသောအဖြစ်အပျက်တစ်ခုရှိခဲ့သည်။ ဒီပရိုဂရမ်ကိုယ်တိုင်က Indy ရဲ့ကိုယ်ပိုင် Peyton Manning အပါအ ၀ င်၊ ၀ န်ထမ်းများကထိုအဖြစ်အပျက်ကိုအပြစ်အနာအဆာကင်းစွာဖြင့်ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ တကယ်တော့ကျွန်တော့်မှာတိုင်ကြားချက်တစ်ခုပဲရှိတယ်၊ အဲ့ဒီအဖြစ်အပျက်ရဲ့နေ့နဲ့ဘာမှမဆိုင်ပါဘူး။
ကံမကောင်းစွာပဲ, ဒီတိုင်ကြားချက်တစ် ဦး doozy ဖြစ်ပါတယ်။ ဤဖြစ်ရပ်သည်ကြောက်မက်ဖွယ်ကောင်းသောမှတ်ပုံတင်ခြင်းအတွေ့အကြုံရှိသည်။ မင်းထိုင်ခုံမှာနေရာချပါ၊
အစကတည်းကမကောင်းဘူးဆိုတာငါသိတယ်၊ ဒါကြောင့်ငါဖန်သားပြင်အနည်းငယ်ရိုက်ယူခဲ့သည်။ ဤတွင်ထွက်စတင်ပုံကိုပါပဲ။
တစ်နေ့မှာ၊ ဒီစာကိုကျွန်မရဲ့စာပုံးထဲမှာရတယ်။ တစ် ဦး gander ယူ။ ပုံပြီးနောက်ငါနှင့်ပူးပေါင်းပါ:
ငါဝန်ခံရတယ်, ဒီမကောင်းတဲ့အီးမေးလ်မဟုတ်ပါဘူး။ လှုပ်ရှားမှုခေါ်ဆိုမှုသည်စာမျက်နှာ၏အနည်းငယ်မျှသာရှိကောင်းရှိနိုင်သည်၊ သို့သော်၎င်းသည်ရဲရင့်ပြီးမျဉ်းသားသောစာလုံးများဖြင့်ဖြစ်သည်။ သင့်လက်မှတ်များကိုယနေ့တောင်းခံပါ။ သူတို့ကပင်အီးမေးလ်၏ကိုယ်ထည်မှာအဲဒီမှာမှတ်ပုံတင်စာမျက်နှာများအတွက် URL ကိုပါဝင်သည်။ ဒါဟာမိုဘိုင်းပစ္စည်းတစ်ခုမှာဒါမှမဟုတ်တစ်စုံတစ်ယောက်ကအီးမေးလ်ကိုပုံနှိပ်ထုတ်ဝေရင်ဒီစာကိုပြန်ရေးခြင်းအားဖြင့်ကျွန်တော်“ နှိပ်” လို့ရပါတယ်။
ဒီ link ဘယ်မှာသွားခဲ့တာလဲ အဲဒါကိုသွားတယ်
ကောင်းပြီ၊ ဦး ဆုံးအနေနဲ့ငါဟာ interititial landing page ကိုသွားကြည့်ရတယ်။ ကောင်းပြီ၊ နောက်ထပ်ကလစ်တစ်ချက်အနည်းငယ်စိတ်ပျက်စရာကောင်းပေမယ့်မဆိုးပါဘူး ငါဒီစာကိုတကယ်မဖတ်ဘူး၊ ခလုတ်ကြီးကိုသာနှိပ်လိုက်တယ်၊ အဲဒါကငါ့ကို ဦး ဆောင်ခဲ့တယ်။
နိဒါန်း - ပွဲ - စာမျက်နှာ
ဤအချက်မှာကျွန်ုပ်၏သတင်းအချက်အလက် oodles ပါသည့်အခြားဝက်ဘ်စာမျက်နှာသို့ပြန်သွားသည်။ ဒီနေရာမှာအချိန်ဇယားပါ၊ ဒီနေရာမှာတည်နေရာလိပ်စာ၊ မြေပုံ၊ ကားပါကင်၊ သင့်ကိုယ်သင်ကြည့်ပါ
ဒါပေမယ့်သေချာတာပေါ့၊ ဒီဟာတွေဟာတကယ်တော့သက်ဆိုင်မှုမရှိသေးပါဘူး။ ကျွန်ုပ်သည်ဤအသေးစိတ်အချက်အလက်များအားလုံးကိုဂရုမစိုက်မီ“ လက်မှတ်တောင်းရန်” လိုအပ်ဆဲဖြစ်သည်။ တည်နေရာအတိအကျကားမောင်းလမ်းညွန် အရေးမကြီးဘူး ငါလက်မှတ်တွေသည်အထိ။
သင်၏ LinkedIn စာမျက်နှာသို့သွားမည်မဟုတ်၊ Twitter ပေါ်တွင်သင်နောက်သို့မလိုက်တော့ပါ။ ငါရည်မှန်းချက်တစ်ခုထားတယ်: သင်၏ဖြစ်ရပ်အတွက်မှတ်ပုံတင်! ဆိုရှယ်မီဒီယာနှင့် ပတ်သတ်၍ ကျွန်ုပ်တို့ပြောနိုင်သည် ပြီးနောက် ကျွန်တော့်လက်မှတ်တွေရပါတယ် နောက်ဆုံးတွင်အခြား Peyton Manning ပရိသတ်များသည်တစ်ချိန်တည်းတွင်လက်မှတ်ရရန်ကြိုးစားနေသည်မဟုတ်လော။
yeah, ငါ့ကိုမှတ်ချက်ပါပဲ။ ငါစိတ်ကူးကိုစိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုတာမင်းမှတ်မိလိမ့်မယ် တစ်ချက်နှိပ်ခြင်းအဖြစ်အပျက်မှတ်ပုံတင်ခြင်း။ ExactTarget မှကမ္ဘာ့အဆင့်မီအီးမေးလ်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးနှင့် Cvent မှကမ္ဘာ့အဆင့်မီအဖြစ်အပျက်စီမံခန့်ခွဲမှုဆော့ (ဖ်) ဝဲ (လ်) တို့မှကမ္ဘာ့အဆင့်မီအီးမေးလ်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးသည်ကျွန်ုပ်၏အချက်အလက်များကိုကြိုတင်ဖြည့်သွင်းထားသည့်ထူးခြားသောလင့်ခ်တစ်ခုမပို့နိုင်ကြောင်းအနည်းငယ်အံ့သြမိသည်။ ။ အနည်းဆုံးတော့သင်သည်ငါ၏အီးမေးလ်လိပ်စာကိုသိ!
ကောင်းပြီ, အနည်းဆုံးငါယခုအမှုကိုပြု။ (အိုး၊ နီးနေပြီဖြစ်သောကြောင့်“ cancel” ကိုနှိပ်လိုက်ပါ။ Jakob Nielsen ကဒီဆိုးဝါးတဲ့အကြံအစည်ကိုဖော်ထုတ်နိုင်ခဲ့တယ်။ လွန်ခဲ့သောဆယ်နှစ်ကျော်က။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ... )
ဒါပေမယ့်ပုံတစ်ခု, မှတ်ပုံတင်စာမျက်နှာမလုံလောကျ။ အကြောင်းပြချက်အချို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့ဒုတိယစာမျက်နှာလိုအပ်သည်။
ဒီတစ်ခါတော့လူတွေဒီပုံစံကိုရောက်တဲ့အခါပုံစံကိုစွန့်ခွာသွားမှာလား။ ပုံစံသည်မည်သည့်အမှန်တကယ်အတည်ပြုချက်ကိုမျှပြုသည်မဟုတ်ပါ။ ဟုတ်ပါတယ်၊ စာလုံးတွေပါတဲ့ဖုန်းနံပါတ်ပါတဲ့ဇစ်ကုဒ်တစ်ခုကိုရိုက်ထည့်ခဲ့တယ်။ ထိုအခါငါ "Save and Next" ကိုနှိပ်ပါ (ငါငါ့အလုပ် "Save" သွားပေမယ့်သိပ်အလုပ်မဟုတ်ခဲ့ပါ။ ) ဒီငါ့ကို ဦး ဆောင်လမ်းပြ ...
ဟုတ်ပါတယ်၊ တကယ်တော့ကျွန်တော်စာတွေကိုမှန်မှန်ကန်ကန်ရိုက်ခဲ့တယ်။ ဒါကဒီစာမျက်နှာကဘာကိုဆိုလိုတာလဲ၊ ငါနောက်တကြိမ်နှိပ်ရမယ်။
အခုငါတို့လုပ်သင့်တယ်။ နောက်ဆုံးတော့! ဒီတော့အခုအချိန်ရောက်လာပြီ
ခေါင်းစဉ်ပေါ်ရှိစာလုံးကြီးများတွင် `အတည်ပြုချက်။ ဆိုသည်။ ဒါပေမယ့်မင်းကိုငါအောက်မှာဖော်ပြထားတဲ့မျက်နှာပြင်ပေါ်ကနေကျွန်တော်ဖောက်ခွဲခဲ့တဲ့စာသားကိုဖတ်လိုက်ရင်၊ တကယ်တော့ဒါကတကယ်တမ်းအတည်ပြုတာမဟုတ်ဘူး။ ယခုတွင်မူ“ လက်မှတ်တစ်ခုကိုတောင်းခံရန်” အခွင့်အလမ်းသည်“ ဖြစ်ရန်အခွင့်အလမ်းကိုတောင်းဆိုရန်” အခွင့်အလမ်းတစ်ခုဖြစ်သည် ထည့်သွင်းစဉ်းစား လက်မှတ်တစ်စောင်အတွက်။ "
မှတ်ချက်။ ။ Express Personnel နဲ့အတူရှေးရှေးလူတချို့နှင့်ကျွန်တော်စကားပြောခဲ့သည်၊ ပရိသတ်များကိုထိုအဖြစ်အပျက်ကိုမြှင့်တင်လိုသော်လည်း၊ သူတို့သည်နှစ်သက်ဖွယ်ကောင်းသောဖောက်သည်များနှင့်အလားအလာများကိုပထမ ဦး စားပေးအဖြစ်သေချာအောင်ကြိုးစားလိုကြသည်။ ကျနော့်အမြင်မှာအီးမေးလ်နဲ့မြှင့်တင်ရေးကဘာကိုရွေးချယ်ရမှန်းမသိဘူး၊ ငါ့အချိန်ငါးမိနစ်လောက်ဖြုန်းတီးသလိုခံစားရတယ်လို့ငါထင်မြင်ခဲ့တယ်။ ငါသူတို့ထင်တာကသူတို့စီးပွားရေးအတွက်ကောင်းတဲ့တက်ရောက်သူတွေကိုရွေးချယ်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆုံးဖြတ်ချက်ကောင်းတွေချမှတ်နိုင်တယ်လို့ထင်တယ်၊ ဒါပေမယ့်ငါပြောနေတာကိုငါသဘောကျတယ်။
အခုငါဒီမှတ်ပုံတင်စနစ်ကတော်တော်လေးအထင်ကြီးနေဆဲဖြစ်သည်။ သတင်းအချက်အလက်အတုအများစုကိုပေးခွင့်ပြုသည့်အခါ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်အားဖန်သားပြင်တစ်ဒါဇင်တစ်ဝက်ကိုကလစ်နှိပ်ခြင်းဖြင့်သာမကလက်ရှိရက်စွဲကိုဆုံးဖြတ်ရန်စွမ်းရည်မရှိပုံရသည်။ တကယ်လို့didပြီ ၁၅ ရက်မတိုင်ခင်ဒါမှမဟုတ်အပြီးမှာလက်ရှိပြက္ခဒိန်ကိုကြည့်ဖို့ငါမလိုအပ်ပါဘူး။ စနစ်ကသတင်းစကားမှန်ကိုပြသသင့်တယ်။
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ငါပြီးပြီ။ ငါလက်မှတ်ရရင်မေ ၂ ရက်အထိစောင့်မယ်လို့ငါထင်တယ်။ ဒါပေမယ့်စောင့်ပါ၊
ဒီမှတ်ပုံတင်စနစ်ကငါဘယ်သူလဲဆိုတာသေချာတယ်။ အခမဲ့လက်မှတ်အတွက်အီးမေးလ်ကိုသိမ်းထားရမလား။ သိသာထင်ရှားတဲ့ငါဒီအီးမေးလ်လိပ်စာနှင့်အတူတစ် ဦး တည်းသာပါပဲ။
သေချာတာပေါ့ဒီမှတ်ပုံတင်စနစ်ကတတ်နိုင်သမျှ ရေတွက်။ “ လက်မှတ်ရရှိနိုင်မှု” ဟူသောစကားစုကစနစ်သည်သတ်မှတ်ထားပြီးသောထိုင်ခုံအရေအတွက်ကိုခြေရာခံနိုင်ခြင်းမရှိဟုဆိုလိုသည်။
Aprilပြီလ ၂၂ ရက်နေ့မှာနောက်ထပ်အီးမေးလ်တစ်စောင်ရပါတယ်။ ငါလက်မှတ်တွေကိုသွားမယ့်လျှင်ငါသင်ယူလိမ့်မည်ဟုယူဆ။ ဒါပေမယ့်အစားငါပိုပြီးရှုပ်ထွေးခဲ့သည့်အရာတစ်ခုခုကိုတယ်:
ဒီနေရာမှာဘာတွေဖြစ်နေတယ်ဆိုတာကျွန်တော်မသိခဲ့ဘူး။ ငါပုံမှန်လက်မှတ်များနှင့်အတူတက်ရောက်ရန် "ရွေးချယ်ထား" ခဲ့ပြီးတော့ဒီပြိုင်ပွဲဝင်ခွင့်လည်းရှိခဲ့သလား အောက်ခြေရှိ“ Request Tickets” ခလုတ်၏ပုံပန်းသဏ္alsoာန်သည်လည်းစိတ်ပျက်စရာဖြစ်ခဲ့သည်။ ဒါကငါပြီးသားခဲ့တူညီတဲ့ပုံစံကိုပြန် ဦး ဆောင်ခဲ့သည်။ ငါ့မူရင်းမှတ်ပုံတင်ခြင်းကိုလျစ်လျူရှုခဲ့တာလား။ ရှင်းရှင်းလင်းလင်းသူတို့ကအောက်ခြေအောက်ပါထဲမှာဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်းတူညီတဲ့အီးမေးလ်လိပ်စာကိုပို့ခဲ့သည်။
မေလ ၄ ရက်နေ့မှာ၊ ဒီအီးမေးလ်ကိုကျွန်တော်ရခဲ့တယ် အစပိုင်းမှာတော့အကျွမ်းတဝင်ရှိလာတယ်။
သူတို့လက်မှတ်ထိုးပေးဖို့ကျွန်တော့်ရုံးခန်းကဘာကြောင့်လာချင်တာလဲဆိုတာကျွန်တော်နားမလည်ခဲ့ဘူး။ ငါအီးမေးလ်ပုံနှိပ်ရုံနိုင်ဘူး။ တစ်စုံတစ်ယောက်ကသူတို့ကိုတံခါးအောက်ကနေပစ်ချခဲ့ပေမယ့်အဲ့ဒီအချိန်မှာဘယ်သူမှမရှိခဲ့ကြဘူး။ ဒါကြောင့်ခရီးစဉ်ဟာအလဟ been ဖြစ်သွားနိုင်တယ်။
မေလ ၁၈ ရက်နေ့မှာဘယ်လောက်အထိဖြစ်ခဲ့သလဲဆိုတာကျွန်တော်မပြောပြနိုင်ပါဘူး။ Fantastic မိန့်ခွန်း။ ကြီးစွာသောကွပ်မျက်။ လှလှပပအလှဆင်ထားသောနေရာ။ ကောင်းမွန်သောအစားအစာနှင့်အလွန်စွမ်းအင်။ အထူးသဖြင့်အဖြစ်အပျက်များကိုမှတ်ပုံတင်ခြင်းတွင်ပါ ၀ င်သည့်ကုမ္ပဏီ ၂ ခု၏ကမ္ဘာ့အဆင့်မီဂုဏ်သိက္ခာကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားသည်။ ဘာဖြစ်သွားတာလဲ?
ExactTarget နှင့် Cvent တို့သည်ပလက်ဖောင်းများသာဖြစ်သည်ဟုသင်ထင်ပြီးအခြားမည်သည့်နည်းပညာကိုမဆိုအလွဲသုံးစားလုပ်သကဲ့သို့သင်သူတို့ကိုအလွဲသုံးစားပြုနိုင်သည်။ ပွဲစဉ်မှတ်ပုံတင်ခြင်းစနစ်ကိုတည်ထောင်ခြင်းနှင့်အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာပြproblemနာဖြစ်နိုင်သည်ဟုကျွန်ုပ်ထင်သည်၊ ထိုသို့ပြုလုပ်သောအဖွဲ့သည်မှတ်ပုံတင်ခြင်းအတွေ့အကြုံကိုဒီဇိုင်းဆွဲရန်အတွက်ရရှိနိုင်သည့်ကျွမ်းကျင်မှုကိုအသုံးမပြုနိုင်ပါ။ သို့ရာတွင်၊ သတင်းစကားသည်ရှင်းလင်းရမည်။ ကြီးသောဖြစ်ရပ်များသည်ချောမွေ့လွယ်ကူစွာအသုံးပြုရန်ဖြစ်ရပ်များကိုမှတ်ပုံတင်ထားသင့်သည်။ ၎င်းသည်သင်၏စျေးကွက်၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်သည်။ သင်စာရင်းသွင်းရန်လွယ်ကူခြင်း၊ သွားရန်လွယ်ကူခြင်းနှင့်သင်ပေးသောအရာများကိုနားလည်ရန်လွယ်ကူလျှင်အတွေ့အကြုံတစ်လျှောက်လုံးတွင်လူအများပိုမိုပါဝင်ကြလိမ့်မည်။
ထို့ကြောင့်ငါ၏အ rant အဆုံးသတ်ထားသည်
ဒီဇင်ဘာ 7, 2011 မှာ 9: 52 AM
အဆိုပါဖြစ်ရပ်သည်အံ့သြဖွယ်ကောင်းကောင်းဖြစ်မည်ဖြစ်သော်လည်းစိတ်ရှုပ်စရာများနှင့်ရယ်စရာကောင်းသည့်အဆင့်များကြောင့်လမ်းတစ်လျှောက်ရှိမှတ်ပုံတင်သူများစွာကိုဆုံးရှုံးခဲ့ရသည်ကိုကျွန်ုပ်စိတ်ထဲတွင်သံသယမရှိပါ။ သူတို့ကိုငါခွင့်ပြုမှာမဟုတ်ဘူး၊ သူတို့ကုမ္ပဏီနဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ပဲရှိပါသေးတယ်။ သူတို့ပြောနေတာက“ သူတို့ကို” အဓိပ္ပာယ်ရှိတယ်လို့ဆိုလိုတာမဟုတ်ပါဘူး။ ပြီးတော့“ မင်း” က“ သူတို့” ထက်ပိုပြီးအရေးကြီးသင့်တယ်။
ဒီဇင်ဘာ 7, 2011 မှာ 10: 21 AM
တုန်လှုပ်စေသော။ ဒီလိုမျိုးတစ်ခုခုကကျွန်တော့်ကိုလက်မှတ်တွေကိုဒီအခြေခံမူမှာပဲမလိုချင်ဘူး။ ဒါပေမဲ့သူတို့ကကျွန်တော့်ကိုလက်မှတ်တွေပေးချင်ရင်သူတို့ကိုလမ်းညွှန်ပေးပါမယ်။ ပထမ ဦး စွာသူတို့သည်ကားထဲ ဝင်၍ ယာဉ်မောင်းရမည်။ သူတို့ ၁၂ မိုင်မောင်းပြီးတဲ့နောက်ဘယ်လမ်းကိုငါပြောပြမယ်။